Somalia: Qoyska Qalbi-Dhagax oo bogaadiyay go’aankii baarlamaanka Dawlada Aan Iskeed Isku Maamulin - Wargane News
Home Somali News Somalia: Qoyska Qalbi-Dhagax oo bogaadiyay go’aankii baarlamaanka Dawlada Aan Iskeed Isku Maamulin
Iyadoo dhawaan baarlamaanka Soomaaliya uu sharci darro ku tilmaamay tallaabadii dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu gacan galisay dowladda Itoobiya Cabdikariin Qalbi-Dhagax ayaa waxaa markii ugu horeysay arrintaan ka hadlay qoyska Qalbi-Dhagax oo dalbaday in dib loo soo celiyo.
Maryan Cabdi Maxamed oo ka mid ah xaasaska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi-Dhagax ayaa sheegtay in markii ugu war danbeysay oo ay la xiriireen uu ku xirnaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
‘’Maalin ayaan wada hadalnay oo aan Salaannay, waa uu na wareystay oo Carruurta ayuu naga wareystay, waxaana uu inoo sheegay in uu xirran yahay oo Xabsi Guri ku jiro magaalada Addis Ababa ayeey tiri Maryan.
Waxaa ay sheegtay in jir dil weyn loo geystay markii laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo, hasse ahatee ma aysan sheegin lagu jir dilay xabsiga uu hadda ku jiro ee magaalada Addis Ababa.
‘’Aad iyo Aad ayaan baarlamanka iyo umadda Soomaaliyeed uga mahad celineynaa Garab istaaga ay noo muujiyeen iyo sidda ay uga dhiidhiyeen sharci darrada lagula kacay Qalbi-Dhagax ayeey tiri’’ Maryan.
Waxaa ay ugu danbeyntii sheegtay in ay rajo badan ka qabto in C/kariin Qalbi Dhagax lagu soo celin doono dalkiisa sida ay hadalka u dhigtay.
Gabar uu dhalay Qalbi Dhagax oo lagu magacaabo Fartuun ayaa iyana sheegtay in ay si wanagsan ula socdaan wararka ku saabsan Aabaheed gaar ahaan go’aankii uu qaatay baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku tilmaamtay mid Wadaniyadeed.
‘’Annaga Eraygi noogu darnaa waxaa ay aheyd in Aabe iyo Ururkii uu ka tirsanaa ee ONLF lagu sheego Aragagixiso halkii aan wax kale ka sugeyney iyo garaawshiyo ayeey madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre la soo shir tageen in ONLF yahay Urur Argagixiso ayuu tiri Fartuun oo la hadashay VOA.
Laakiin Fartuun ayaa ku dhaliishay baarlamaanka Soomaaliya in aysan cadeynin in laga daba-tagi doono Aabaheed Qalbi Dhagax dibna dalka loogu soo celin doono.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 152 cod ku ogolaaday in ay sharci darro aheyd dhiibistii C/kariin Qalbi –Dhagax iyo go’aankii xukuumadda ee ahaa in Ururka ONLF yahay Urur Argagixiso.